अब जनतालाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ | रेडियो झापा 100.7 MHz.
अब जनतालाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ
रेडियो झापा 100.7 MHz. बिहिबार, फाल्गुण २६, २०७८ ७:१८:३२
आज देशको अबस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु मुलुकको भबिश्य बनाउने भन्दा पनि जसरी हुन्छ आफै बन्ने ध्यानमा छन ।
मुलुकको ब्यवस्था बदलियो तर जनताको अबस्था बदलिन सकेन । महंगीले आकाश छोएको छ । सर्बसाधरण जनतालाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ धौं छ । देशमा बेरोजगारी समस्या त्यस्तै छ । युवाहरु रोजगार नपाएर सडक सडक भौतारिदै हिडिरहेका छन ।
आज देशमा गम्भिर समस्या देखा पदै छन । सरकार समस्या समाधान गर्ने कुरामा गम्भिर बन्नु पर्छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरुलाई रोजगार दिने ब्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ । युवाहरु निराश बनिरहेका छन । उनीहरुले देशको भबिश्य देख्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको पछि लागेर युवाहरुले के पाए ? यो गम्भिर प्रश्न हो ।
अब सबैले गम्भिरताका साथ सोच्ने बेला आएको छ । सधै भरी यस्तै अबस्था हुने हो भने देश कहिले बन्छ ? देश बनाउन इमानदारीता र इच्छाशक्तिको खाँचो हुन्छ ? नेताहरुमा इमानदारीता खै ? दल र तिनका नेताहरुको पछि पछि हिडन पनि लाज लाग्न थालिसकेको छ ।
अब यसरी देशलाई अघि बढाउन सकिदैन । सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुले देश लुटेको लुटै छन । जनता काम गरेर समेत आफनो जीवन चलाउन सकिरहेका छैनन् । जनतालाई खोक्रो र उधारो आश्वासन बाँडेर राजनीति कति दिन टिक्छ ? स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भएको अबस्था छ । नेताहरु जनतालाई फेरि भ्रम छर्दै हिडन थालेका छन । अब जनता भ्रममा पर्नु हुदैन । अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनता सचेत बन्नु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ ।
गलत मान्छेलाई भोट दिएर जिताउने काम कसैले गर्नु हुदैन । त्यसो भयो भने भोली हामी आफैले समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ । जनताका समस्या समाधान गर्ने र जनताको दुख्ख सुख्खमा साथ दिने राम्रा र योग्य उम्मेदवारलाई चुन्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा नेताहरु इमान्दार हुन नसक्दा समस्या निम्तिएको छ । राजनीति भनेको समाज सेवा हो । तर यहाँ राजनीतिलाई ब्यापार ब्यवसाय बनाउन खोजिएको छ । त्यसो भएको हुनाले राजनीति बदनाम भइरहेको छ ।
नेताहरु चुनावमा भोट माग्न आउँदा उनीहरुलाई जनताले प्रश्न गर्नु पर्छ । बिगतमा चुनाव जितेर के के काम भयो ? कुन कुन ठाउँमा बिकास भयो ? तपाईहरुका घर घडेरि यति छिटो कसरी जोडिए ? बिगतमा हामीलाई आश्वासन बाँडेका कुरा किन पुरा हुन सकेनन् ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरु आ आफना उम्मेदवारहरुलाई सोध्नु पर्ने भएको छ ।
नागरिक तहबाट नेताहरुलाई खवरदारी गर्न छोडनु हुदैन । जनताले लडेर ल्याएको ब्यवस्था हो यो । नेताहरुलाई मनपरी गर्न दिनु हुदैन । अहिलेका जनता सचेत छन । जनताले सहि रुपमा बिवेक प्रयोग गर्न सिक्नु पर्छ । देशको भबिश्य अन्धकार बनाउन कसैले पाइदैन । जनतालाई ढाँटने र छल्ने काम पनि कुनै दल र तिनका नेताहरुले गर्नु हुदैन ।
ढाँटको राजनीति लामो समय सम्म टिक्न सक्दैन । यो कुरा नेताहरुले बुझे हुन्छ । अब जनतालाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ । अब जनतालाई नेताहरुको भाषण होइन, सुशासन सहितको शासन चाहिएको छ ।